बिहाबारी कति वर्षपारि ? - विवाह विशेष - नारी
मंसिर ५, २०७७ विवाहका लागि सही जीवनसाथी चयन गर्नु सबैभन्दा कठिन कार्य हो । अहिले त विज्ञानका अनुसार पनि विवाहका लागि सही उमेरका बारेमा जानकार हुनु आवश्यक छ । ‘युनिभर्सिटी अफ उताह’ का प्राध्यापक निकोलस एच. वोल्फिङ्गरले गरेको एक अध्ययनका अनुसार २८ देखि ३२ वर्ष उमेरभित्र वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूमा सम्बन्ध विच्छेदको सम्भावना कम हुन्छ । त्यहीँ ३२ वर्षको उमेर भन्दा माथि विवाह गर्ने र ४० वर्षको प्रारम्भतिर विवाह गर्नेहरूमा सम्बन्ध विच्छेदको खतरा बढेको पाइयो । ३२ वर्षपछि विवाह गर्नेहरूमा सम्बन्ध विच्छेदको खतरा हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतले बढ्छ । ३० वर्षमा विवाह गर्ने मानिस आफ्नो विवाहका विषयमा बढी गम्भीर हुन्छन् र उनीहरूलाई आफ्नो वैवाहिक जीवन सफल बनाउन धेरै बोझ महसुस हुँदैन । यसकारण उनीहरू सुखी रहन्छन् र उनीहरूको वैवाहिक जीवन पनि सुखमय रहन्छ । यो अध्ययनअनुसार ३० वर्षका जोडी बढी समझदार र आर्थिक रूपबाट पनि मजबुत हुन्छन् ।
वोल्फिङ्गरद्वारा गरिएको रिसर्चअनुसार पुरुष र महिला दुवैले २८ देखि ३२ वर्षमा विवाह गर्नु उचित हुन्छ । विज्ञानका अनुसार विवाहका लागि यो सही समय हो । त्यसो त आजको भागदौडको जीवन शैलीमा करियरको चक्करमा ढिलो विवाह गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । उच्चतम शिक्षा उपलब्धि, त्यसपछि सुरक्षित करियरमा अवतरण र त्यसमा समृद्ध वर्तमान तथा सुरक्षित भविष्य यी सबैको आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा समयमै विवाहभन्दा पनि ढिलो गरी विवाह गर्नेहरूको जमात बढ्दो छ । कुनै हदसम्म महिलाको तुलनामा पुरुषको काँधमा आर्थिक जिम्मेवारी बढ्ने गरेको पाइन्छ । यसको अर्थ महिलामा हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन । त्यसैले आर्थिक रूपमा दुवै सक्षम हुनु आवश्यक छ । अहिले महिलाले २५ वर्ष र पुरुषले २७वर्षपछि मात्रै विवाहका बारेमा सोच्ने गरेको पाइन्छ । यो उमेरसम्म आइपुग्दा महिला–पुरुष दुवै पक्ष धेरै हदसम्म मानसिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपमा मजबुत हुन पुग्छन् । वैधानिक रूपमा प्रमाणित भएको विवाहका लागि योग्य उमेरको यो अवस्थालाई धेरै युगल जोडीले स्वीकार गरेको पनि पाइन्छ । प्रजनन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि महिलाले ३० वर्षसम्ममा विवाह गरिसक्नुपर्छ ।
विवाहका लागि सही उमेर के हो ? यो एउटा त्यस्तो मुद्दा हो जसमा विभिन्न देशमा विवाहसम्बन्धी कानुनमा युवा–युवतीको उमेर कानुनतः तोकिएको पाइन्छ । हाम्रो देशको कानुनअनुसार महिला–पुरुष दुवैले २० वर्षपछि विवाह गर्न पाउँछन् । शिक्षाको आवश्यकतासँगै यसको प्रभाव विवाह गर्ने जोडीहरूको उमेरमा प नि पर्न गएको देख्न सकिन्छ । अधिकांश शिक्षित व्यक्तिले २५ वर्षपछि मात्रै विवाहका बारेमा सोच्ने गरेको पाइन्छ । यस पछाडिको प्रमुख कारण हो आफ्नो भविष्यको सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यक्तिको जागरुकता । शिक्षाकै जागरुकताका कारण युवा–युवती शैक्षिक योग्यता, कार्यदक्षता र कार्यक्षमताको अभिवृद्धिपछि मात्रै विवाहको सम्बन्धमा निर्णय गर्नेतर्फ अग्रसर हुने गरिएको पाइएको छ । आफ्नो करियर र भविष्यको सुनिश्चितताबिना वैवाहिक जीवनका बारेमा सोच बनाउनेहरू बिरलै पाइन्छन् । यस कारण विवाह गर्ने उमेरमा प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ । विवाहका लागि सही उमेरका बारेमा गरिएका धेरै खोजका अनुसार २९ वर्षको उमेरलाई परफेक्ट मानिएको पाइन्छ । यस पछाडिका कारणहरू :
यो उमेरसम्म आइपुग्दा आफ्नो जीवनसाथीमा के–कस्ता गुणहरू हुनुपर्छ भन्ने बारेमा राय बनिसक्ने अवस्था हुन्छ । कस्तो बानी, व्यवहार, विचार आदि मनपर्छ/मनपर्दैन भन्ने विषयमा तय भइसकेको अवस्था रहन्छ । अतः आफ्ना लागि सही जीवनसाथी चयन गर्ने मामिलामा गल्ती हुने सम्भावना कम रहन्छ र सम्बन्धको महत्व र आवश्यकतालाई बुझ्ने परिपक्वता पनि विकसित भैसकेको हुन्छ ।
वैवाहिक जोडीमध्ये यदि महिलाको उमेर बढी भएमा महिलामा यौन व्यवहार र भावनात्मक पक्षमा परिपक्वता देख्न पाइन्छ । उनीहरू आफ्नो पुरुष सहयात्रीलाई यौन प्रक्रियामा सन्तुष्ट राख्न सक्छन् । पुरुषले पनि यौन जीवनलाई सक्रियतापूर्वक अँगाल्न सक्छन् । अतः यिनीहरूको यौन जीवन सुखमय हुन्छ ।
वैवाहिक जोडीको उमेर भिन्नता छैन र समान छ भने उनीहरूको यौन जीवन सुमधुर र सुखमय रहन्छ । दुवैले एक–अर्काको आवश्यकता, प्राथमिकता, चाहना र सन्तुष्टिलाई बुझ्न सक्छन् र सोहीअनुरूप व्यवहार पनि गर्न सक्छन् । अतः यौन जीवनमा समस्या देखिने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहन्छ ।